Waa kuma Engin Arık? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWaa kuma Engin Arık?
21 / 05 / 2020 GUUD, Yaa yaa
Engin Arık (14kii Oktoobar 1948 - 30 Noofambar 2007) wuxuu ahaa fisikiste maaddada Turkiga ah isla markaana horay u ahaa borofisar ka tirsan waaxda jimicsiga ee Jaamacadda Boğaziçi. Wuxuu caan ku ahaa aragtidiisa ku saabsan in miinada Thorium ay noqon karto xalka nadiifka ah iyo dhaqaale ee dhibaatada tamarta.
Wuxuu ku dhashay magaaladda Istanbul 14-kii Oktoobar, 1948. Wuxuu ka qalinjabiyey Dugsiga Sare ee Gabdhaha Atatürk 1965. Ka dib markii uu ka qaatay dibloomaha xisaabta iyo fiisigiska jaamacadda Istanbul sanadkii 1969, Arık wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo sidii caawiye arday oo kale ah isla markaana ah gudoomiye ku takhasusay cilmiga fiisigiska isla isla jaamacada.
Engin Arık wuxuu ka qaatay shahaadada mastarka (MSc) sanadkii 1971 isagoo ka qaatay jaamacada Pittsburgh qeybta cilmiga fisikiska sare (1976). Mawduuca ugu weyn ee daraasaddiisa caafimaadka ayaa ahayd xasiloonida la arkay isagoo diraayo beroolka loo yaqaan 'hyperon' oo ka kooban qaybaha kala duwan. Isaga oo ah cilmi baadhe ka tirsan qalliinka kadib 1976-1979, wuxuu kaqeyb qaatay tijaabooyin kusaabsan qaab dhismeedka qalalaasaha leh ee loosoo dirayo bartilmaameedka hydrogen ee Jaamacada London iyo Rutherford Laboratories.
Sannadkii 1979 wuxuu ku soo noqday Turkiga wuxuu galay qaybta Fiisigiska Jaamacadda Bogazici. Wuxuu noqday macalin jaamacadeed sanadki 1981 isagoo daraasadiisa ku qaatay maadada tijaabada tamarta sare. Sannadkii 1983, wuxuu ka baxay jaamacadda si uu uga shaqeeyo Kutubka Xogta laba sano ka dibna wuxuu ku laabtay jaamacadda Boğaziçi wuxuuna jaamacad ka noqday 1988.
Intii u dhaxeysay 1997 iyo 2000, Arık wuxuu u shaqeeyey sarkaal radionuclide sarkaal ka tirsan Ururka Imtixaanaadka Banniinka oo dhameystiran, oo ah wakaaladda Qaramada Midoobay ee Vienna.
Kadib 1990, wuxuu kaqeyb qaatay daraasado CERN. Wuxuu hogaamiyay saynisyahano Turki ah oo kaqeybqaatay tijaabooyinka ATLAS iyo CAST. Arık wuxuu daabacay in ka badan boqol maqaal oo ku saabsan tijaabada tamarta sare ee tijaabada wuxuuna qaatay boqolaal xigashooyin ah. Arık, oo sidoo kale ahaa maamulaha Mashruuca Maareynta Dhaqaalaha ee Turkiga, wuxuu ku dhintey shilka diyaaradda Isparta 30kii Nofembar 2007. Waxaa lagu aasay qabuuraha Edirnekapı Martyr.
Arık wuxuu guursaday Professor Metin Arık, oo bare ka ahaa isla isla jaamacadda Boğaziçi, wuxuuna lahaa laba caruur ah.
Waxay ku yaalliin h-index oo ku saleysan qiimeynta qiimeynta Webometrics ee la daabacay 2014, wali waxay ku jirtaa kaalinta koowaad taas oo saynisyahano ku sugan Turkiga.
Kaliya tijaabooyinka jimicsiga sare ee jimicsiga oo aan ku xaddidnayn shaqadiisa garoonka Arik, dhibaatooyinka tamarta ee thorium miinada ayaa laga helay kayd muhiim ah oo Turkey ah oo nadiif ah waxaana laga helay xalka dhaqaale inay noqon karto iyo in himilada iyo shaqada ay tahay inay ahaato. Marka taa la eego, qulqulatooyinka Turkiga iyo waxay heleen awood ay ku soo saaraan koronto markii kumanaan kun oo foosto ay soo jeediyeen inay u dhigmaan ilaha tamarta ee saliida. Mashruuca Dardargelinta CERN iyo xubinnimada Turkiga sababtoo ah shaqadiisa ku saabsan dilkiisa ayaa la sheegay, in diyaaradda laga soo saaray Mossad ama sheegashada waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigto hay'ad kale oo sirdoon ah.
RayHaber Ayaa iyo Sababta
Waa kuma Vecihi Hürkuş?